အထည်ချုပ်လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ မေလ ၁ရက်နေ့တွင် စတင်ပေးအပ် | Myanmar Business Today
HomeBusinessအထည်ချုပ်လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ မေလ ၁ရက်နေ့တွင် စတင်ပေးအပ်
အထည်ချုပ်လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ပေးမည့် ရန်ပုံငွေကို မေလ ၁ရက်မှစတင်၍ အလုပ်သမားထံသို့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဉရောပသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ပထမအသုတ်အဖြစ် ငွေလွှဲပြောင်းထောက်ပံ့မှုကို ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်း ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည့် စက်ရုံခြောက်ရုံမှ အလုပ်သမားများကို စတင်ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အလုပ်သမား ၉၀၀၀၀ခန့်ထံသို့ လွှဲပြောင်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
“အလုပ်သမားတွေ ခက်ခဲရုန်းကန်နေရတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မြန်ကူအစီအစဉ်ကနေတစ်ဆင့် အီးယူကပေးတဲ့ အထောက်အပံ့တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အီးယူနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု အလုပ်သမား၊လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများမှ အထည်ချုပ်လုပ်သား ၂၅၀၀၀ ခန့်မှာ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက် အဆိုပါ အလုပ်သမားများကို ဉရောပသမဂ္ဂက တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ၇၅၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်လ များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID 19ကြောင့် စား၀တ်နေရေး ခက်ခဲနေရတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ လုပ်သားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုအပေါ် အခုလို လုပ်ပေးတာက ဉရောပ သမဂ္ဂရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ရပ်တည်မှုတစ်ခုပါ။ အလုပ်သမားတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို မြန်ကူက လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဉရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt က ပြောသည်။
မြန်ကူ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အဖြစ် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အသုံးပြုမည့် ယူရို ၅သန်းသည် United Nations Office for Project Services(UNOPS) မှ စီမံခန့်ခွဲသည့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုမှ ရယူခြင်းဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ကြေးပေးရာတွင် နိုင်ငံသားပိုင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသည့် အလုပ်သမားများကို အဓိက ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လတွင် ကုန်ကြမ်း ပြတ်လပ်ကာ အထည်ချုပ်စက်ရုံအချို့ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသည့်အတွက် အလုပ်သမား ထောင်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး လုပ်သားအင်အား ၃၈၀၀၀၀ ကျော် အလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပို့ကုန်တန်ဖိုးမြင့်မားသော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် အထည်ချုပ် စက်ရုံပေါင်း ၁၅၀၀ ၊ ပို့ကုန်တန်ဖိုး ၁၀ ဘီလီယံနှင့် အလုပ်သမား ၁၀ သိန်းခန့် ရှိလာရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“We appreciate the support provided by the EU through the Myan Ku programme in these times of hardship for workers. We will also cooperate with the EU to address the issues,” U Thein Swe, Union Minister for Labour, Immigration and Population, said.
Around 25,000 garment workers lost their jobs due to Covid-19 and European Union will provide them K75,000 per month for April, May and June.
“The Myan Ku Emergency Cash Fund is real solidarity from the European Union towards the thousands of workers in Myanmar, and their families, who lost their livelihoods due to COVID-19. Myan Ku will provide quick, easily accessible financial support for the workers,” said EU Ambassador Kristian Schmidt.
Myan Ku isa€5 million [K 7.9 billion ] project funded by the European Union.
The Myan Ku Fund provides direct cash transfers to affected garment workers employed in locally-owned, joint venture or foreign owned factories.
The payments are disbursed through Wave Money
to workers in crisis who are jobless and/or face eviction from their homes;
to workers whose contracts were illegally terminated, thereby also countering irresponsible practices, and;
to workers of Small and Medium Enterprises (SMEs) who agree to retain workers and to provide at leastamatching support
Recipients are selected in consultation with trade unions and local civil society organisations.
Previous articleMRF suggests 18 points for farmers
Next articleSME ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းအတွက် အတိုးနှုန်း ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ချမည်